April 8, 2019 April 8, 2019 खबर खुराकLeaveaComment on सुन्दर किन हुनुपर्‍यो !
मेगान नोलान, काठमाडौँ, २५ चैत । मेरो गृहनगर आयरल्यान्डको सडकमा एउटा विशाल ऐना छ । त्यसले एउटा भवनको एकातर्फको भाग पुरै ओगटेको छ । मेरी आमाको घरबाट सहरको केन्द्रतिर जाँदा त्यो ऐना बाटामा पर्छ ।
टिनएजर भएपछि त्यो ऐना छल्न मैले अर्को बाटो हिँड्न थालेंँ ।
ऐना सधैं चमचमाउँदो र सफा हुन्थ्यो । त्यसमा सडकको छवि उदेकलाग्दो देखिन्थ्यो । त्यसले अनायासै मेरो छवि पनि मलाई देखाउँथ्यो, जसरी अरूले हेरिरहेका हुन्थे ।मेरो वरपर र कोठामा रहेका अरू साना ऐनाहरू वा मेरो फोनमा रहेका क्यामरामा हेर्नुअघि म आफूलाई तयार पार्न सक्थेंँ ।
तर त्यो सडकको ऐनाले भने मजस्तो अवस्थामा हुन्थेंँ, त्यही रूपमा मेरो प्रतिविम्ब देखाइदिन्थ्यो । त्यसमा म सुन्दर वा आकर्षक नदेखिन पनि सक्थेँं । सत्यसँग एक्कासि मेरो साक्षात्कार हुन्थ्यो । जति नै समय लगाई मेकअप गरेर, राम्रा लुगा लगाएर वा आकर्षक देखिने गरी बाहिर निस्किए पनि म सुन्दर भने थिइनँ ।युवा हुँदा मलाई सुन्दर देखिने उत्कट अभिलाषा थियो ।
त्यो निकै गाह्रो र पीडादायी इच्छा थियो । मलाई प्यारी वा मायालु हुनु थिएन । पुरुषहरूका अगाडि आकर्षक हुनु पनि थिएन । ‘सेक्सी’ देखिनु पनि थिएन । केवल सुन्दर देखिनु थियो । र म सुन्दर छैन भन्ने सत्यले थप पीडा दिन्थ्यो । मलाई कुनै बहस वा तर्कभन्दा माथि उठेर सुन्दर देखिनु थियो । कसैले सुन्दर युवतीको कल्पना गरेर कोर्ने चित्रमा जस्तै सुन्दर देखिनु थियो, मलाई ।
उमेर बढेसँगै पुराना सोचहरू हराउँदै गए । सुन्दर नहुनुभन्दा पनि नराम्रा कुरा मेरो जीवनमा आए । यो वर्षको पहिलो महिना मैले वाटरफोर्डस्थित घरमा आफ्ना आमा–बुबासँग बिताएँ । किनकि म वास्तविक जीवनमा फर्कन नसक्नेगरी टाट पल्टिएकी थिएँ । मेरो जीवन अधोगतितर्फ लागेकामा पनि तनावग्रस्त र निराश थिएँ ।
उमेरले अट्ठाइस वर्षकी भएर पनि दुई छाकका लागि आफ्ना आमा–बुबामा आश्रित भएकामा मर्नु भएको थियो ।
वर्षौंपछि म यति लामो समय घरमा थन्किएकी थिएँ । त्यसमा पनि ऐनाले देखाइदिएको आफ्नो शारीरिक वास्तविकताले मलाई थप पीडा दिएको थियो ।टिनएजरका रूपमा आदर्श मानक माने अनुरुपको सुन्दर आफू छैन भन्ने सोच मबाट हटेको थिएन ।
त्यो कतै लुकेर मात्रै बसेको थियो । जेसुकै गरे पनि आफू सुन्दर भने छैन भन्ने सम्झाउनका लागि मेरो घर, आयरल्यान्डले कुरिरहेको थियो ।अब भने पहिलो पटक म कोही सुन्दर हुनै पर्दैन भन्ने बुझ्दै थिएँ । उमेर बढ्दै जाँदा आफूले आफूलाई प्रेम गर्ने प्रयास गर्दै थिएँ । आफ्नो शारीरिक कमीलाई पूर्वाग्रहरहित आँखाले नियाल्दै त्यसलाई आत्मसात् मात्रै नभई प्रशंसा गर्ने कोसिसमा थिएँ । चुनिएका केही मात्र होइन, वास्तवमा म पनि सुन्दर छु र अरू सबै जना सुन्दर छन् भन्नेमा विश्वास गर्ने प्रयत्नमा थिएँ ।
मैले यो सोचलाई नक्कली हाँसोका साथ दाह्रा किटेर स्वीकार गरिरहेकी थिएँ ।
आफ्नो शरीरलाई नग्नावस्थामा हेर्दै र ‘म सुन्दर छु’ भन्दै चिच्याएकी पनि थिएँ । मलाई सधैं डर लाग्ने गरेको काम गरेर हेर्ने कि भन्ने सोच पनि आएको थियो । मैले आफू कहिल्यै सुन्दर हुन सक्दिनँ र हुनु पनि परेको छैन भनेर आत्मसात् गरे के हुन्छ ?
Tagged काठमाडौँ सुन्दर किन हुनुपर्‍यो !
संविधान विरोधी गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्न गृहमन्त्रीको निर्देशन
बालश्रमिक नभएका घरमा नगरपालिकाकाे हरियो झण्डा
कार्ल मार्क्स र एंगेल्सको वर्गिय दृष्टिमा साहित्य – एक अालेख
April 22, 2018 खबर खुराक